Ungabelana njani ngeefoto nabantu abaninzi kwi-iPhone yakho | IPhone iindaba
Ungabelana njani ngeefoto nabantu abaninzi kwi-iPhone yakho
ULuis Padilla | | iOS 10, Izifundo kunye neencwadana
I-iPhone iba yenye yeekhamera ezisetyenziswa kakhulu. Asekho la maxesha apho iikompact ezincinci zazingukumkanikazi weziganeko zentlalo, kwaye ngoku iikhamera ze-smartphone ziye zangamaqabane angahlukaniyo, enkosi phakathi kwezinye izinto ekuphuculeni okubonakalayo kumgangatho wazo, ngokunjalo.njengamathuba amakhulu abasinika wona, njenge-geolocation , amathuba okwabelana nabo kwangoko kwinethiwekhi yoluntu kunye nokuzihlela kubhabho. Kodwa kukho into abasivumela ukuba siyenze kwaye iluncedo ngokwenene: yabelana ngazo zonke iifoto neqela labantu ukuze kungabikho kubhenela kwii-imeyile okanye kuWhatsApp ukuzithumela. Bade bavumele ukhetho lokuba wonke umntu abandakanye iifoto zabo kunye nokwenza ialbhamu yokusebenzisana. Kulula kakhulu kwaye kukho ukhetho kuzo zonke izinto ozithandayo. Siza kukuchazela apha ngezantsi.
1 Iifoto ze-iCloud, ngaphandle kokushiya ikhaya
2 Iifoto zikaGoogle, enye indlela
3 I-Dropbox, iqhelekile
4 Iindlela ezintathu ezizezinye zomsebenzi obaluleke kakhulu
Iifoto ze-iCloud, ngaphandle kokushiya ikhaya
Ngokucacileyo iApple isinika enye indlela yokubulela kwiThala leeNcwadi le-ICloud kunye nee-albhamu ekwabelwana ngazo. Ukuba ungumsebenzisi welayibrari ye-iCloud, okanye nokuba awukho, ungasoloko usenza ii-albhamu eziza kulayishwa kwilifu lakho kwaye unokwabelana nabanye abasebenzisiNgubani, ukuba uyamvumela, uya kuba nakho ukufaka iifoto zakhe. Ilula kakhulu, into yokuqala ekufuneka yenziwe kukwenza icwecwe ekwabelwana ngalo ngokukhetha iifoto ofuna ukuzibandakanya kunye nokusebenzisa i "Iifoto ekwabelwana ngazo". Singabongeza kwi-albhamu esele yenziwe okanye entsha. Unokukhetha ukuba ngubani owabelana naye naye, ukhetha incwadi yakho yedilesi, okanye uyishiye ingenanto kwaye uyenze esidlangalaleni ngekhonkco.
Nje ukuba i-albhamu yenziwe, yivule kwaye emazantsi uyakufumana "Abantu" ukhetho apho unokumisela khona iindlela zokwabelana, vumela abanye ukuba bayihlele, okanye benze ikhonkco eluntwini nabani na onayo anokujonga ngayo ezo foto. Indlela egqibeleleyo yokwabelana nge-albhamu kunye nokuqokelela zonke iifoto zomtshato okanye zomtshato kunye, kwaye ngaphandle kwesicelo somntu wesithathu.
Iifoto zikaGoogle, enye indlela
UGoogle usinika ukhetho olufana kakhulu neApple, kwaye ayinamsebenzi nokuba sine-iPhone okanye i-Android. Iifoto zikaGoogle yinkonzo yokugcina ilifu ekuvumela ukuba ulayishe zonke iifoto zakho ngaphandle kwemida yendawo, nangona ngama-nuances. Ukwenza icwecwe ekwabelwana ngalo ukuze abanye bafumane zonke iifoto kulula ngakumbi kunokhetho luka-Apple, kuba kufuneka ukhethe iifoto kuphela kwaye ukhetho «I-albhamu ekwabelwana ngayo» iya kuvela ngqo. Njengakwi-Apple, sinokukhetha ngokuthe ngqo ukuba yeyiphi abantu esifuna ukuyifumana okanye ukukopa ikhonkco kwaye nabani na onayo unokufikelela.
Ukuthetha ngenkonzo yokugcina ilifu kwaye ungathethi ngeDropbox sisono, ke sikwabandakanya enye indlela enikezelwa yinkonzo yeqonga elingapheliyo. I-Dropbox isivumela ukuba senze ikopi yogcino lweefoto zethu kwilifu lakho, ngokuzenzekelayo. Ukuba olu khetho lwenziwe lwasebenza, siya kuba nolawulo olubizwa ngokuba yi "Layisha ukusuka kwikhamera" esinokwabelana ngalo ngokunqakraza kwityolo lasekunene. Ukuba sifuna kuphela ukwabelana nabanye, emva koko senza ifolda yethu kwaye ucofe kutolo lwayo. Nje ukuba sabelane, sinokwenza ikhonkco ukuze siyithumele kubamkeli, siqwalasele amanqanaba okufikelela, njl.
Iindlela ezintathu ezizezinye zomsebenzi obaluleke kakhulu
Ukuthumela iifoto nge-WhatsApp kukuphulukana nomgangatho ongenakuxolelwa xa sisebenzisa iikhamera kwinqanaba le-iPhone 7 Plus. Uninzi lweenkonzo ze-imeyile azikuvumeli ukuba uthumele kunye / okanye ufumane ii-imeyile ngezinamathiselo ezinkulu, kwaye iifoto zithatha indawo engakumbi nangakumbi. Sebenzisa iinkonzo zokugcina ilifu kuya kusiba luncedo ngakumbi kubomi bemihla ngemihla, kunye nokwabelana ngeefoto zeefoto zonke akukho ngaphandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungabelana njani ngeefoto nabantu abaninzi kwi-iPhone yakho
I-Apple yongeza i-QZSS kwinkcazo ye-iPhone 7 kunye ne-7 Plus
Amarhe amva okuba i-iPhone 8 iya kubiza ukuhlawuliswa